GOUJIAN: Seefta qadiimiga ah ee Shiineeska ee Waqtigeedu Ceyriyey - Dhulkii Quduuska ahaa ee Daraasadaha Vietnam
Konton sano kahor, seef naadir ah oo aan caadi ahayn ayaa laga helay xabaal ku taal Shiinaha. In kasta oo uu fiicanyahay ka badan 2,000 sano, seefta, oo loo yaqaan the Goujian, ma lahayn hal raad oo daxal ah. Mindida ayaa dhiig soo jiidatay markii cilmi baaraha archeologist uu farahiisa ku tijaabiyay cidhifkiisa, oo umuuqda mid aan saamayn ku yeelanaynin waqtiga. Tayadan layaabka leh mooyee, farshaxannimadu waxay ahayd mid aad u faahfaahsan oo loo haysto seef la sameeyay waqti hore. Seef ahaan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay khasnad dawladeed maanta Shiinaha, seeftu waxay halyeey u tahay dadka Shiinaha sida King Arthur's Excalibur ee Galbeedka.
In 1965, cilmi-baarayaal ku takhasusay cilminafsiyeedka ayaa fulinaya sahan gudaha ah Gobolka Hubei, kaliya 7 km (4 miles) oo ka yimid burburka Jinan, oo ah magaalo madaxda dalka dowladdii hore ee Chu, markay ogaadeen konton xabaal oo qadiimiga ah. Intii lagu jiray qoditaankii xabaalaha, cilmi baarayaashu waxay soo heleen seefta Goujian oo ay weheliyaan 2,000 oo kale oo farshaxanno ah.
Soosaaristii reer Goujian
Seefta Goujian waxay u egtahay sidii maanta oo kale labo sano kahor. (Isha: Wikimedia Commons)
Sida laga soo xigtay hogaamiyaha kooxda qadiimiga qadiimiga ah ee qodista, waxaa laga helay xabaal, meel ku dhow sanduuq alwaax adag ku dhaw oo lafaha. Kooxda ayaa yaabtay markii seeftii garka ahayd ee naxaasta ahayd ee ilaashaneyd ay kuxirtay santuuqa. Markii ay ahayd mid aan la nadiifin, lafaha ayaa loo muujiyay in uu ahaa mid aan bisilayn in kasta oo lagu aasay xaalado qoyan laba sano gudahood. Baadhitaan ay sameeyeen qadiimiyaasha cilminafsiga ayaa waxay muujiyeen in qoryaha fudud ay si fudud u jari karaan xirmo labaatan warqad ah.
The Seefta Goujian waa mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee loo yaqaan Seefta Jian, seef laba af leh oo toosan oo la adeegsaday intii ugu dambeysay 2,500 sano Shiinaha. Seefaha Jian waxay ka mid yihiin noocyada seefta ee ugu horreeyay Shiinaha waxayna xiriir dhow la leeyihiin quraafaadka Shiinaha. Sheeko-faneedka Shiinaha, waxaa loo yaqaan "The Gentleman ee Hubka”Waxaana loo arkaa mid ka mid ah afarta hub ee waaweyn, oo ay weheliyaan shaqaalaha, waranka, iyo sabarka.
Seefta Goujian, Hubei Matxafka Gobollada (Source: Wikimedia Commons)
Marka la barbardhigo gaagaaban marka la barbar dhigo qaybo taariikhi ah oo la mid ah, Gouijan seefta waa seefta naxaasta ah oo leh feejignaan sare oo ah copper, ka dhigaysa mid aad u jilicsan oo aan u badnayn inuu burburo. Geesaha ayaa laga sameeyay tin, iyaga oo ka dhigaya kuwo adag oo karti u leh inay sii hayaan gees af badan. Waxa kale oo jira qaddar yar oo ah birta, horseed iyo baaruud in seefta, iyo cilmi baaris ayaa shaaca ka qaaday saamiga sare ee baaruud iyo koob qulqulaya, taas oo seefta siinaysa tayadeeda miridhku. Waxyaabaha madow ee rhombic waxay daboolayaan labada dhinac ee daabka iyo muraayadda buluugga ah iyo turquoise waxaa lagu dhejiyay seefta. Qabashada seefta waxay ku xidhan tahay xariir halka dhaldhalaalka uu ka kooban yahay 11 wareeg oo urursan. Seeftu wax bay cabbirtaa 55.7 cm dherer (21.9 in), oo ay ku jiraan a 8.4 cm (3.3 in) xamili hilt, oo leh a 4.6 cm (1.8 in) daab ballaaran. Waa culeyskeedu yahay 875 garaam (30.9) oz.
Farmashiyaha waxaa loo arki karaa ku dhegan gacanta seefta (Source: Wikimedia Commons)
Anshax marinta qoraalka
Dhinac dhinac ka mid ah laba tiir oo qoraal ah lagu arki karo leh sideed xaraf, oo u dhow hilt, kuwaas oo ku jira fartii hore ee Shiinaha. Qoraalka, oo loo yaqaan "鸟 虫 文" (macno ahaan ''shimbiraha iyo Gooryaanka jilayaasha ”) waxaa lagu gartaa qurxinta khafiifka ah ee istaroogyada qeexan, waana noocyo kala duwan oo ah zhuan taasi waa mid aad u adag in la akhriyo. Falanqaynta bilowga ah ayaa xallisay lix ka mid ah siddeedan xaraf. Waxay akhriyaan, "越 王" (Boqorka Yue) iyo "自 作用 剑" ("seeftaan u sameysay (isaga) adeegsi shaqsiyeed"). Labada haray ee haray ayaa loo badinayaa inay yihiin magaca boqorka.
Laga soo bilaabo dhalashadiisa gudaha 510 BC si ay u halligto gacmaha Chu in 334 BC, sagaal boqor ayaa xukuma Haa, oo ay ku jiraan Goujian, Lu Cheng, Bu Shou, Iyo Zhu Gou, iyo kuwa kale. Aqoonsiga boqorka ee leh seefta ayaa dhaliyay dood ka dhex dhashey archaeologists iyo aqoonyahan luuqada Shiinaha ah. In ka badan laba bilood ka dib, khubaradu waxay sameysteen isafgarad taas oo asal ah Mulkiilaha oo ka mid ah seefta ahaa Goujian (496 - 465 BC), samaynta seefta hareeraha 2,500 sano jir.
Goujian wuxuu ahaa amiir caan ah taariikhda Shiinaha oo xukuma Gobolka Yue inta lagu jiro Spring iyo Xilliga dayrta (771 - 476 BC). Tani waxay ahayd waqti lagu calaamadeeyay fowdo gudaha Dawladii Zhou oo ay magaceeda ka qaadataa magaca Spring iyo Annals Day, kaas oo muddo dheer xanuujiyay. The Spring iyo Xilliga dayrta wuxuu caan ku ahaa safarada militariga; isku dhacyadan waxay keeneen kaamil ahaanta hubka illaa heer ay si aan caadi aheyn u adkeysanayeen oo dilaayeen, iyagoo qaatay sanado in la abuuro oo soconaya qarniyo. Sheekada Goujian iyo Fuchai, Boqorka reer Wu gobolka, u halganka is dhex galka ayaa caan ku ah Shiinaha oo dhan. In kasta oo Goujian's boqortooyada markii hore waxaa jabiyay Gobolka Wu, Goujian ciidankiisa u horseedi lahaa guul 10 sano kadib.
Guryo aan caadi ahayn
Ka sokow qiimaheeda taariikhiga ah, aqoonyahano badan ayaa la yaabay sida seefkan uu ugu sii nagaadhi lahaa miridh la’aan deegaanka beenta ah, in kabadan 2,000 sano, iyo sida qurxinta jilicsan loogu xardhay seefta. The seefta Goujian wali waa sidii maanta oo kale sidii markii hore markii la aas aasay, isla markaana meel qudha oo miridhku jidhka ka heli maayo maanta.
Cilmi baarayaashu waxay falanqeeyeen burburintii hore ee naxaasta ah iyagoo rajeynaya in la helo hab lagu soo celiyo tiknoolajiyada loo isticmaalo abuurista seefta. Waxay ogaadeen in seeftu adkaysi u tahay oksijiinta ka dhalata sulfation dusha sare ee seefta. Tani, oo ay weheliso qolof hawo adag leh, ayaa u oggolaatay seefta halyeeyga ah in laga helo xaaladda noocan oo kale ah.
Tijaabooyinku sidoo kale waxay muujinayaan in kuwa seefta ka shaqeeya ee Wu iyo Gobollada Yue Koonfurta Shiinaha intii lagu jiray Spring iyo Xilliga dayrta waxay gaareen heer sare oo macdan ah oo ay awoodaan inay ku dhex daraan biraha-dahaarka leh afkooda, iyagoo ka caawinaya inay ka badbaadaan da 'ahaan bilaa tabar daran.
Seefta wax yeelaysay
In 1994, ka Seefta Goujian ayaa lagu amaahday si loogu soo bandhigo gudaha Singapore. Iyada oo nin shaqaale ah uu seefta ka saarayo kiiskeedii gabagabadii carwada, ayuu garaacay hubkii, wuxuuna sababay bur-bur 7-dheer ah. Burburki wuxuu sababay buuq gudaha Shiinaha oo marna looma ogolaan dalka dibadiisa mar labaad. Waxaa hadda lagu hayaa at the Matxafka Gobollada Hubei.
+ “Seefta Goujian. ” HistoriaRex.com. http://historiarex.com/e/en/89-sword-of-goujian.
+ “Seefta Seefta: Seefta Goujian. ” Dhaqanka Shiinaha.
+ Andrei, Mihai. “Seeftii Goujian - oo aan shaqo la helin 2700 Sano ka dib. ” Sayniska ZME. Oktoobar 21, 2011.
+ Kalamidas, Thanos. “Masiibadii Ka Dhimatay Millennia. ” Gbtimes.com. Abriil 17, 2013.
1 Bryan Hill: Bryan wuxuu ka qalin jabiyay Bachelor of Art in History kana soo qaatay jaamacada Suffolk wuxuuna leeyahay taariikh madxafnimo mutadawacnimo iyo waliba la shaqaynta kooxaha caruurta ee Matxafka Sayniska iyo National Park Service. Wuxuu safaro badan ku soo maray guud ahaan Mareykanka iyo sidoo kale caalamka. Kadib markii uu qaatay labo semestar oo dibedda ah iyada oo loo marayo Jaamacadda Mississippi, wuxuu booqday burbursanno badan iyo goobo Ahraam ah oo ku yaal Mexico halkaas oo uu ku soo saaray qadarin dhaqammadii hore iyo ilbaxnimooyinkii. Intii uu halkaas joogay, wuxuu sidoo kale qaatay luqad labaad oo Isbaanish ah. Iyada oo ay weheliso ka qalin-jabinta Taariikhda, Bryan wuxuu xubin ka yahay Phi Alpha Theta National Honors Society. Waqtigiisa firaaqada, Bryan wuxuu ku raaxeeyaa la shaqeynta, aqrinta wuxuuna daneynayaa daawada iyo nafaqada.
Xigasho: Asal qadiimi ah, Dib-u-furid ka timaadda bini-aadamnimadii hore: old-origins.net
Text Qoraal geesinimo leh iyo sawirada sepia-ka waxaa dejiyay Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com
(Booqday jeer 4,718, booqashooyinka 8 maanta)
Views Views: 3,039
← Tusaalooyin qaar ka mid ah qoraalka NÔM
CHỮ NÔM ama Qoraalkii hore ee Fiyatnaamiis iyo Kaalintiisii ​​Hore ee Suugaanta Vietnamese - Qeybta 1 →
Iskuday inaad barto TAARIIKHDA DHAQANKA EE DHAQANKA DHAQANKA EE DHAQANKA GUUD - Qaybta 3
Comments Off on Isku day ah in la barto TAARIIKHDA DHAQANKA ee farshaxanka VIETNAMESE MARTIAL Art - Qaybta 3
Beesha GIA RAI oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah
Comments Off Beesha GIA RAI oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Fiyatnaamiis ah
Hordhac SAIGON - SII GUUD EE DHAQAALAHA EE DHAQANKA
Comments Off ku saabsan Hordhaca SAIGON - JOOGTA BARIGA FAR
Ma runbaa inuu kani yahay PANORAMA ee SOCIETY VIETNAMESE SOCIETY bilowga qarnigan?
Comments Off on Ma runbaa inuu kani yahay PANORAMA ee SOCIETY VIETNAMESE SOCIETY bilowga qarnigan?
Comments Off on CINDERELLA - Sheekada TAM iyo CAM - Qaybta 2
Comments Off on Lý Toét, Xã Xã's PORTRAITS
Comments Off ku saabsan UJEEDADA goobta DHULKA QUDUUSKA EE WAXBARASHADA VIETNAM
Booqashada Maanta: 278
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,199
Guud ahaan Wadarta: 286,094